Gbasawanye na Spain: Ahịa E-Azụmaahịa Na-ekwe nkwa | ECommerce ozi ọma
Gbasawanye na Spain: Ahịa Ecommerce Na-ekwe nkwa
E jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị na Europe, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga n’ onlinentanet na Spanish. Ebe ọ bụ na enweghị ike ịkọwa ya dị ka okenye, ọ bụ ebe mara mma maka mba ụwa na-ere ahịa.
Spain enweela oge ihe isi ike na-agbake site na nlaazu. Ma ugbu a, dị ka Nweta ahiaSite na 60% nke ndị mmadụ na-azụ ahịa na ntanetị, Spain bụ ahịa e-commerce kachasị ukwuu na ndịda Europe, na-ahapụ Italy na Turkey n'azụ.
1 Spain: ahịa na-ekwe nkwa nwere ọtụtụ ikike ịre ahịa n'ịntanetị
2 The Spanish asịwo na-aga dijitalụ
3 Mebie ntụkwasị obi na mmeri na ụlọ ahịa Spanish n'ịntanetị
Spain: ahịa na-ekwe nkwa nwere ọtụtụ ikike ịre ahịa n'ịntanetị
Dị ka ọmụmụ rụrụ site na Commissiontù Na-ahụ Maka Ahịa na Asọmpi Mba, n'ihe banyere Spain, a na-azụta ngwaahịa na mba ọzọ karịa ka erere. Yabụ, ahịa a na - apụta nwere ọtụtụ ohere ị ga - eji na - ahia ahia ahia.
Maka ndị na-ebido ebido, ụfọdụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ metụtara ahịa ịntanetị:
8% nke ndị ọrụ Internetntanetị niile bụ ndị Spain
Ná nkezi, a na-etinye 513 EUR kwa onye na ntanetị kwa afọ.
Otu n'ime ụbọchị ịzụ ahịa n'ịntanetị kachasị na Spain bụ Cyber ​​Monday
Otu ndị na-ere ahịa n'ịntanetị bụ Uwe na akpụkpọ ụkwụ, nri na ihe ọ Dụ Dụ sochiri.
Spanish bụ asụsụ nke atọ a na-ejikarị eme ihe n'ịntanetị, mgbe Bekee na Mandarin gasịrị.
The Spanish asịwo na-aga dijitalụ
Ndị Spen hụrụ ịzụ ahịa n'okporo ámá n'anya. Otú ọ dị, kemgbe ọbịbịa nke teknụzụ ọhụrụ, omume amalitela ịgbanwe. Ọmụmaatụ, iPad Sunday bụ ihe ọhụrụ na-akọwa oge ịzụ ahịa kacha elu na-eme na Sọnde, na-abụkarị n’agbata elekere isii nke abalị na elekere asaa nke abalị
Mebie ntụkwasị obi na mmeri na ụlọ ahịa Spanish n'ịntanetị
N’izugbe, ndị Spain na-enwe mmasị ịzụ ihe n’ onlinentanet, ma ọ dị mwute ikwu na ụfọdụ n’ime ha anaghị emecha ihe ha zụtara n’ onlinentanet. Ọ bụghị naanị n'ihi na onye zụrụ ahịa hụrụ ọnụahịa ahụ dị oke elu, kamakwa n'ihi nsogbu ntụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Gbasawanye na Spain: Ahịa Ecommerce Na-ekwe nkwa
Kedu ihe kpatara m ji achọ ngwa maka azụmaahịa m maka ekwentị mkpanaaka?
Malite nnwere onwe ụgbọ ala na-agbanwe agbanwe